Filipina : Famonoana ny Zanakavavin’ny Mpitarika Kaominista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2018 4:57 GMT
Ny alin'ny 5 Martsa 2009, lehilahy roa nirongo fiadiana no tonga naka an-keriny an'i Rebelyn Pitao, 20 taona, vehivavy mpampianatra tao Davao, tanàna iray ao atsimon'i Filipina. Ny ampitson'io, hita tany amin'ny tanàna iray mifanila aminy ny fatiny. Nahitàna ratra lalina natao taminà zava-maranitra fisokirana ranomandry, dianà fampijaliana sy angamba koa fanolànana.
Ny 20 Martsa i Rebelyn no tokony hankalaza ny tsingerintaonany faha-21. Raha zanak'i Lenicio Pitao, iray amin'ireo filohan'ny antoko mpihoko kaominista i Rebelyn, manamafy kosa ny reniny fa tsy misy idiran'ny zanany vavy mihitsy izay hetsika rehetra ataon'ny rainy.
Ramatoa filoha, Gloria Macapagal-Arroyo, izay itambesaran'ireo fiampangàna azy ho manitsakitsaka ny zon'olombelona [angl] ao anatin'ny ady ataony amin'ireo mpihoko, dia nandà [ang] hoe tsy misy idiran'ny tafika velively ny fakàna an-keriny sy ny famonoana an'i Rebelyn.
Betsaka ny olona nisafoaka tamin'io heloka bevava mahatsiravina io, izay niteraka fanehoankevitra marobe teny anatin'ny tontolon'ny bilaogy tao Filipina. Isan'ireny, azo raisina ilay tononkalo iray amin'ny teny filipiana sy anglisy nosoratan'i E. San Juan Junior [angl], olona iray nahita fianarana ary Filipiana iray fantadaza amin'ny fanakianana.
“Tokony ho nahavita be ho an'ny fiarahamonina i Rebelyn amin'ny naha-mpampianatra azy raha toa ka tsy maty tanora tahaka iny”, hoy ny nosoratan'i Norma Dollaga [angl] . Maneho ny fangorahany ilay niharam-boina sy ny havany ny mpanoratra ilay bilaogy Marry Anne's Musings.
Tsy mahalala manokana an'i Rebelyn Pitao aho, saingy tohina kosa nandre ny zavatra nihatra taminy, rehefa hita tao anaty riandrano iray ny fatiny, zara raha nitafy, nahitàna ratra maro vokatry ny zavamaranitra. Nifatotra ny tànany ary notapenana ny vavany, vao mainka manamafy ny filazàna fisianà fampijaliana sy fanolànana. Amin'ny maha-reny ahy, manao izay rehetra azoko atao aho hiarovako ny zanako, misoroka mba tsy haratra izy ireo ao anatin'ity tontolo masiaka ity, ary marary lavitra noho izy ireo raha sanatria misy hirifiry manjo ireo zanako vavy ireo. Tena mangoraka tanteraka ny renin'i Rebelyn aho, no sady maneho ny fiarahamiory amin'ny fianakaviany.
Ny mpanoratra ny bilaogy “That Word in Me” indray kosa tezitra [angl] amin'ny tsy firaharahàna mandavantaona mihatra amin'ny soatoavina sy ny endrika masina ananan'ny ain'olombelona.
Tsy raharahako izay maha-zanaky ny iray amin'ireo mpitarika mpihoko azy ; mpitarika iray izay efa imbetsaka no nanaovan'ny governemanta ezaka ny hisamborana azy, fa tsy nahitàny vokatra. Lehilahy iray tomponantoka taminà fandresena maro teny an-tanin'ady nifanaovany tamin'ny tafika sy ny governemanta. Fa ny tena mahatezitra ahy mafy, ny tena mampisafoaka dia mampisafoaka ahy, dia ny hoe vehivavy iray tsy manantsiny no lasibatry ny fihetsika tsy mendrika sy feno habibiana. Hadisoany ve ny maha-zanaky ny rainy azy? adisoany ve raha toa miezaka ny tsy ho voasambotra ny rainy nandritra izay taona maro izay? Inona no idirany amin'izany rehetra izany?
Porofoin'ìo famonoana mampihoron-koditra io ny toerana mampalahelo misy ny zon'olombelona eto amin'ity firenena ity, hoy [angl] ilay mpanao gazety, Ding Gagelonia.
Heverina ho miaina anaty demaokrasia mandray ny Fifanarahana momba ny Zon'Olombelona ho vatofehizoron'ny Repoblika isika.
Nefa izay nitranga tamin'i Rebelyn, 20 taona, dia milaza zavatra hafa mihitsy amintsika.
“Iza no namono an'i Rebelyn? ” hoy ihany i Gagelonia manontany ny tenany. Marobe ny olona, toy ilay mpanoratra ny bilaogy Musings of a Random Mind [angl], no manondro avy hatrany ny tafika ho tomponandraikitra tamin'ilay fakàna an-keriny.
Raha tsy olon'ny tafika ireny, dia ambarao, olona izy no hahavita sy feno fahasahiana haka an-keriny sy hamono vehivavy tanora tahaka ireny, izay ny hany hadisoany dia ny maha-zanaky ny iray amin'ireo mpitarika mpihoko azy? Nanamarika ny fikambanana Human Rights Watch tamin'ny taona lasa (2008) fa nitombo be ny isan'ny famonoana olona hatramin'ny 2006 nanambaràn'ny filoha Gloria Arroyo ny hanaovany “ady tsy misy indrafo” amin'ny Tafika Vaovaon'ny Vahoaka.
Nampanao fanadihadiana momba ilay vono olona ny filoha Gloria Arroyo mba hahafahana manasazy izay meloka. Raha tsaraina amin'izany, avy amin'ny famintinana ireo fanadihadiana tany aloha mitovy karazana aminy, isika tsy tokony hanantena zavatra betsaka avy amin'ny fitantanana iray efa hita ho toy ny iray faran'izay anjakan'ny kolikoly indrindra teo amin'ny tantaran'i Filipina .
Itarainan'i [angl] Mopera Amado Picaradal, pretra sady mpikatroka mafàna fo ho an'ny fandriampahalemana ny firaiketan'ny “kolontsain'ny fahafatesana” amin'io firenena io.
25 taona mahery izao, lasa zavatra mahazatra ny famonoana olona heverina ho mpanao heloka bevava sy mpikomy. Nantenaiko fa hivalona miaraka amin'ny lasa ireny rehetra ireny tamin'ny fianjeran'ny jadon'i Marcos. Ankehitriny anefa, mitohy izany ao Davao. Misy andiany iray mpamono, mamono izay heverina ho mpanao heloka bevava, ary misy andiany iray hafa mpaka an-keriny sy mamono, tsy ireo heveriny ho mpihoko fotsiny fa ny havany akaiky ihany koa. Ohatra iray vaovao amin'ny kolontsain'ny fahafatesana sy ny tangolingoliky ny herisetra eto amin'ny firenentsika izany.